နိုမ်ငန်ဒေါ်စိုဗဲ State | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » နိုမ်ငန်ဒေါ်စိုဗဲ State
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 12, 2011 in Critic, Opinions & Discussion | 21 comments
သဂျီးတင်လိုက်တဲ့ သြဂုတ်လ ၅ရက်ထုတ်.. မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ မောင်တင်အေး(သရက်)ရဲ့ နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခြင်းဆောင်းပါး ဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိလို့ပါ။ ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာ တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခွာပြေးပြီး သူတပါးနိုင်ငံမှာ အခြေကျနေထိုင်သူ၊ နိုင်ငံတော် ကျေးဇူးသစ္စာကို ခံစားပြီး (သူတို့အဆိုအရ) တခြားနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ခံ၊ နိုင်ငံသားခံယူသူ ပြည်ပအတိုက်အခံများကို စွတ်စွဲတိုက်ခိုက် ထားပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် စွပ်စွဲသလို နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးများ ဥပမာ ပညာသင်ဆု ယူပြီး အိမ်မပြန်တဲ့သူတွေလဲ ရှိပါမယ်။ ကျနော်က နိုင်ငံရေး ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားသူ၊ နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြည်ပရောက်နေသူလည်း မဟုတ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက် မရှိပါ။ စဉ်းစားမိတာ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ တကယ်ရှိသလား၊ ဝေါဟာရသက်သက်လား၊ ဘယ်လိုမျိုးကို ခေါ်သလဲ။ ပြည်တွင်းမှာ အတိုက်အခံများကို နှိပ်ကွပ်၊ ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အခါ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လိုသလို ဆွဲသုံးလေ့ရှိတယ်။
နိုင်ငံတော် ဝေါဟာရနဲ့မစခင် ဆောင်းပါးပါ စွပ်စွဲချက်တခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ နိုင်ငံရေးခိုလှုံ၊ နိုင်ငံသားခံတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ကိုယ်စား ထင်မြင်တာကို ပြောချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အတ္တ၊ ဘဝ၊ မိသားစု ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ နှစ်ရှည်လများနေပြီး နိုင်ငံတခုရဲ့ အသိအမှတ်ပြု ပတ်စ်ပို့မရှိ၊ မရေရာတဲ့ ဘဝကို ဘယ်သူဖြတ်သန်းချင်မှာလဲ။ ကိုယ်တိုင် နေနိုင်တယ်ထားအုံး၊ မိသားစုကရော တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ တိုင်းပြည်က နိုင်ငံသားဖြစ် ချင်ကြမှာပေါ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရေရှည်မှာ အတ္တနဲ့ပရ မျှနိုင်မှ ရှင်သန်နိုင်တယ်။ နောက်တချက် ခိုလှုံရာတိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (နိုင်ငံသားလက်မှတ်) မရှိရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ရင်း အရေးကြုံတဲ့အခါ ဘယ်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်း ပေးမှာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်လည်း မရှိ (သို့) တရားမဝင်တော့ဘူး (ရှိလည်း လာကြည့်မှာမဟုတ်)။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်အသိုင်းအဝန်း မိသားစုဝင်တွေတောင် အာဏာတန်ခိုး ထွားနေလျက်နဲ့ စင်္ကာပူ၊ ဩစတေးလျားလို နိုင်ငံမျိုးမှာ သွားနေအခြေချ သေးတာပဲလေ။ သူတို့ နိုင်ငံသား မခံတာတော့ ပြည်တွင်းက ပိုင်ဆိုင်မှုအမွေတွေ ဆုံးရှုံးမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တရုတ်ပြည်၊ မြောက်ကိုရီးယားလို အာဏာရှင်တိုင်းပြည်တွေမှာ နိုင်ငံတော်ဆိုတာကို အများပြည်သူ ကြောက်ရွံ့လေးစားအောင် အဆောက်ဦးအကြီးကြီး၊ ခန်းမအကြီးကြီး၊ အလံဧရာမကြီးတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ စစ်ဆင်မှု ပြုပါတယ်။ သူတို့လွှတ်တော်ခန်းမ၊ နိုင်ငံတော်ရင်ပြင်၊ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး ရုပ်ထုတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် နေရာအကျယ်အဝန်း၊ အမြင့်ထုထည်တို့ကို တမင်တကာ ကြီးမားခန့်ထည်အောင်လုပ်ထားပြီး ပြိုင်တုခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်သင်္ကေတအဖြစ် အုပ်ချုပ်သူများကိုယ်စား ပုံဖေါ်ပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ စကားရပ်သည် ကြီးမားကျယ်ဝန်းလို့ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရန် ခက်ပါလိမ့်မယ်။ အာဏာရှင်အစိုးရများကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော် စကားလုံးကို ဝေဖန်သူတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့အခါ၊ လိုချင်တာ ရအောင်ယူတဲ့အခါ ပြန်မလှန်ရဲအောင် သုံးပါတယ်။ ပညာရှင်ဆန်ဆန် ဘက်မလိုက်ကြေး သတ်မှတ်ကြရင် နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းပြည်နယ်နမိတ် အကျယ်အဝန်းရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ ဒြပ်ရှိဒြပ်မဲ့ အားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သက်ဆိုင်တာမို့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဆီကို ဦးတည်သွားပါပြီ။ အုပ်ချုပ်သူတိုင်း အစိုးရမဟုတ်သလို ဥပဒေတိုင်း တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်း မဆောင်ကြဉ်းပါဘူး။ ပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်း ခံရသူများသာ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကို တာဝန်ခံနိုင်လို့ နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း တိုင်းပြည်အတော်များများမှာ လွပ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး အငြင်းအခုံ ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့ အမြဲတစေ သုံးကောင်းတဲ့ ပေတံဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို တထစ်လျော့ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အကျိုးစီးပွား ဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်ရင် နိုင်ငံတော်အကျိုး သယ်ပိုးတယ်လို့ ပြောရင်လည်း နာဇီဂျာမနီ၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ နိုင်ငံတော် အမည်ခံထိုက်သလား။ သူတို့ခေတ်မှာ ခိုင်းတာကို ဆန့်ကျင်ရင် နိုင်ငံတော်ကို အာခံမှုပုဒ်မနဲ့ သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တယ်။ သမိုင်းဆိုတာ နိုင်သူတွေရေးတာလို့ပြောသူ အများရှိတာမို့ အပြတ်ပြောဖို့ ခက်ပါမယ်။
သူတပါးကို တရားလက်လွတ် မထိခိုက်စေဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆိုရင်ရော ထိုက်တန်မလား။ ဥပမာ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး၊ ကြီးပွားတိုးတက်ရေး၊ ပြည်ပကျူးကျော်မှု ခုခံစစ်ပွဲ။ ဒါဆိုရင်ဖြစ် ကောင်းပါမယ်။ အရောင်အသွေး အယူဝါဒ မစွဲဘဲ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနဲ့အညီ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးပြုသူ မှန်သမျှ နိုင်ငံတော်နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ အစိုးရတရပ်သည် အချိန်ကာလတခုသာနဲ့ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်ကတော့ အချုပ်အခြာအာဏာ မဆုံးသ၍ တည်ရှိနေပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် လစာ၊ခံစားခွင့်၊ အဆောင်အယောင်ဆိုတာ တည်ဆဲအစိုးရက ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ အခွန်ငွေ၊ သယံဇာတရောင်းရငွေများနဲ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဆောင်၊ အလုပ်လုပ်ပေးလို့ ချီးမြှင့်တာပါ။ စစ်အစိုးရ ဝါဒဖြန့်ချီရေးတွေမှာ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ရင်ပဲ ကျေးဇူးကန်းသလို၊ သူတို့အိပ်ထဲကပဲ စိုက်ပေးနေရသယောင် တဖက်စောင်းနင်း ရေးပါတယ်။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရွက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ် အတိုက်အခံများကို သတင်းစာထဲမှာ ပုတ်ခတ်ရေးသားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ အာဏာယစ်မူးလွန်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ငံတော်လို့ မတန်မရာ ထင်ကုန်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။ http://myanmargazette.net/59958/politics-news-issues စပ်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင်ကြီး … ဆက်စပ်ပြီးတွေးကြည့်ပါတယ် .. သဘောပေါက်ပါတယ် ..။ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နဲ့ရပ်လိုက်တာလဲ … ဒါ့ထက်အားရပါးရရေးစေချင်ပါတယ် ..။
“နိုမ်ငန်ဒေါ်စိုဗဲ” ကိုနားလည်အောင် တော်တော်ဖတ်ယူလိုက်ရတယ် ဦးကြောင်ကြီးရယ်
ဦးကြောင်ကြီး နာဇီတံဆိပ်ကြီးနဲ့ပါလား (ဖက်ဆစ်တော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်)
ဦးကြောင်ကြီးပြောတာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ ဥာဏ်မမှီတော့ မူးသွားတာပဲ
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ တစ်ခုခုဆောက်လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Eventတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကလုပ်တာဆိုရင် ဗျူးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာပါ ဆိုတာကြီးကတော့ အမြဲပါတယ်
သူတို့အုပ်စုက နိုင်ငံတော်လား၊ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာကြီးလဲ၊ နိုင်ငံတော် ဦးကြောင်ကြီးရှင့်
ဒါဆို သတင်းစာတွေမှာပါတဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဘိုချုပ်ကြီး ဘယ်သူ ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တပ်တာကြီးက မှားနေတာပေါ့နော် ဦးကြောင်?
ပညာရှိပီသပါပေတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ကိုရီးယား အစားအစာ အကြောင်းထင်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး မူးသွားတယ်။ သူများက ခေါင်းစဉ်ကို နားလည်အောင် တော်တော်ဖတ်ယူလိုက်ရတယ် ဆိုတော့မှ ကိုယ်လည်း ၃-၄ ခါလောက် ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက် ပြောင်းပြန်ဆိုကြည့်လိုက်နဲ့။ အဲဒီတော့မှ ကိုကြောင်ကြီးဆိုပဲ။
နိုင်ငံ အကြီးအကဲ တွေရဲ့ စေတနာ တဲ့ ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာ တဲ့ ၊ စေတနာ ရှိလို့ လုပ်ပေးတယ် ဆိုတဲ့သဘော ကိုပြောတာပေါ့။ စေတနာ မရှိရင် မလုပ်ပေးဘူး ဆိုတဲ့သဘောကို ဆောင်တာ။ တံတား တစ်ခု ဆောက်ပြီးရင်၊ ဆည်တစ်ခု ဆောက်ပြီးရင်၊ လမ်း တစ်ခု ဖောက်ပြီးရင် သီချင်းတွေ အမျိုးမျိုး စပ်ပြီး နိုင်ငံတော် နဲ့အကြီးအကဲ တွေကို ဂုဏ်တင်၊ အမွန်းတင်ပေး နေကြတယ်။ Propaganda ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာထင်တယ်။
လူတွေတိုင်းမှာ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရင် အလုပ်ရဲ့သဘာဝ အရယူရတဲ့တာဝန် ရှိတာပဲ။ ဥပမာ စစ်သားလုပ်ရင် လက်နက်ကိုင် ပြီး ပြည်သူ လူထုကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီးကာကွယ်ရမှာပဲ။ ဆရာဝန်လုပ်ရင် သွေးသံ တွေကို မရွံ ၊ မကြောက်ပဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု လုပ်ပေးရမှာပဲ။ အဲလိုပဲ အစိုးရ လုပ်ရင်လဲ ပြည်သူလူထု စား၊ ၀တ်၊ နေ ရေး လုံခြုံရေး ဆိုတာကို အလိုအလျောက်တာဝန် ယူရတာပဲ။ ပြည်သူ လူထု အတွက်လုပ်တဲ့ကိစ္စကို စေတနာ ရှိမှလုပ်ပေးမယ်( ဒါမှမဟုတ်) လုပ်ပေးတာကို ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာပါဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကို အမွန်းတင် နေတာ ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံခြား မှာ နေတဲ့ ညီအစ်ကို တွေ၊ ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အစိုးရက ပြည်သူလူထု အတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေး ပြီးရင် သီချင်း စပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုကြလား၊ အစိုးရ ရဲ့ စေတနာ ဆိုတာမျိုး ပြော ကြလား အတွေ့ အကြုံတွေ ကျွန်တော်တို့ ကို ပြန်ပြီး Share ကြပါအုံး။
In foreign democratic country, we frequently heard like the following
“It isagreat honour and privilege to serve the people of —-”
They never use their ” စေတနာ “.
They generally use ” serve ”
Because, they believe,
every government staffs are just servant for the people.
They must loyal & give humble service to the people.
In fact, People is greater than government, there.
For example, they use,
” this car was donated by the people & government of NSW ”
You see, they posted “people” in front of “government”.
Their basic principle started from
” US President Abraham Lincoln’s Gettysburg Address “.
” Government of the people, by the people, for the people ”
Government consists of the people.
Government appointed by the people.
Government serves for the people.
” Lincoln was mistaken that the world will little note, nor long remember what we say here. Rather, the world noted at once what he said, and will never cease to remember it. The battle itself was less important than the speech.”
အော် အာဏာရှင်ပါဆိုမှတော့ I AM THE STATE ပေါ့။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဲလိုပဲခံမှာပါ။နောက်ဝန်ထမ်းပေါ့ အဓိက ကတော့လက်နက်ကိုင် ၀န်ထမ်းပေါ့။ပြည်သူဝန်ထမ်း ဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အခွန် တွေနဲ့ ငါတို့က်ို လခပေးထားတာပါလား ငါတို့ရရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါလား အဲဒီအတွေးခေါ် မျိုး ၀န်ထမ်းတွေခေါင်းထဲရောက်မခံဘူး။
အကြောင်းအရာက လေးနက်ပြီး ခေါင်းစဉ်က ပေါ့သွားတယ်။ ခနဲ့ချင်လို့ တမင် သုံးတာဆိုရင်တောင် အသံထွက်အမှန်လေးနဲ့ပေါင်းရင် နားလည်သေးတယ်။ အခုတော့ နိုမ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်း မသိလို့ အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ စိုဗဲ ကနေ စ နားလည်လိုက်လို့ ပြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့် လိုက်တော့မှ သိသွားတယ်။
ဦးကြောင် အောင်ကြူး ရေးတဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်တာ အောင်ကြူကြူ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ် …
ကျွန်တော်တို့ ဂျာမဏီမှာ ဟစ်တလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတွေမှန်သမျှ
( ရုပ်ပုံ စာသား သံစဉ် ) လုံးဝသုံးစွဲခွင့်မပြုထားဘူး
တစ်ကယ်တော့ သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ ကိုယ်ကအတိုက်ခံ
ဆိုလိုတာက နှစ်ဘက်စလုံး ရန်သူတွေဘဲဂလား
အန့်နမီအက်သည်ဂိတ် ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထည်းက စကားပြောခန်းလေးအတိုင်းပေါ့
ဝီဘို့ဆိုးလ်းဂျား ဝီဘို့အန့်နမီ ဘဲ
အဖွားကြီးကို ကလားမယားဆိုပြီး လုပ်ကြတာတွေ
ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု့တွေကို
ဘာတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ညှာမှာ ဆည်မြောင်းတွေဆောက်တာ
ပြည်သူတွေကို ဘာမှ မထိခိုက်စေဘူးဆိုဘဲ
ကျွန်တော်ကတော့ စာမတတ်တော့ သိပ်မပြောလိုပါဘူး
သဂျီးမင်းကတော့ စွမ်းအင်တွေဘာညာ ထောက်ခံထားလေရဲ့
အစိုးရဟူသော ပညတ်မှားကို မသုံးရ။ ပြည့်အစေခံဟူသော ပညတ်မှန်ကိုသာ သုံးစွဲရမည်။
သခင်ဘသောင်း ကြေငြာချက်တွေထဲက တခုပါ..။ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြေငြာချက်မှာ ပါတယ်..။
တကယ်တော့..ပညတ်..အမည်ပေးခေါ်တာတွေက တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်..။ ပညတ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ ဆိုတာ.. အဲဒါပဲ..။
နိုင်ငံတော်..နိုင်ငံတော်ဆိုပြီး… နိုင်ငံနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားသူတွေလည်း.. ဒီဓါတ်သက်ရောက်သွားတာပဲ..။
– မြန်မာငွေကြေးအမည်ကို ကျပ်ပြား လုပ်ထားတာပြင်ရမယ်.။
– ကျွန်တော်၊ကျွန်မ ဆိုတဲ့ နာမ်စားအသုံးပြင်ရမယ်( ဒါကို ကျွန်စော်နံတယ်ဆိုပြီး.. သခင်ဘသောင်းကလည်း ပြောတယ်)
– ဒုက္ခသည် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို ပြင်ရမယ်.။
နောက်ဆုံး.. စိတ်ထဲ..သိသိသာသာ သတိထားမိနေတာကတော့.. အမေရိကန်နိုင်ငံ.. အမေရိကန်သွားမယ်.. သဖြင့်.. တိုင်းပြည်အမည်ကို.. လူမျိုးအမည်နဲ့ရောချသုံးနေတာပါပဲ.။
အမေရိကန် ဆိုတာ လူမျိုးကိုခေါ်တာ..။
အမေရိကား ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကိုခေါ်တာလောက်တောင်..သတိမထားမိပဲ.. မှောက်နေကြလေရဲ့..။
(အမေရိကန် ဆိုတာ လူမျိုးကိုခေါ်တာ..။
အမေရိကား ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကိုခေါ်တာလောက်တောင်..သတိမထားမိပဲ.. မှောက်နေကြလေရဲ့..။)
သိကို မသိတာပါ သဂျီးရေ။ ခုမှပဲသိလို့ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ ရှင့်။
အမေရိကန် ဆိုတာ လူမျိုးဟုတ်ရဲ့လား သူကြီးရယ်၊ နိုင်ငံသားလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးလား။
အမေရိကန် လူမျိုးရယ်လို့ ရှိလို့လား၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံ လာရောက် အခြေ ချ နေထိုင်နေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေကိုကော အမေရိကန် လူမျိုးလို့ ခေါ်တာ သေချာရဲ့လား။
သူကြီးလိုလူက ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါ..စကားနောက် တရားပါ..ဆိုတာတွေကို ယုံလို့လား။
မြန်မာတွေဟာ.. လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်အမည်ကို မကွဲပြားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ..။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့..လူမျိုးတောင်.. မြန်မာ (Myanmar)ဆိုပြီး တမည်ထဲဖြစ်နေသာတာကြည့်ပေတော့..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အမေရိကား(America)နဲ့..အမေရိကန် (American)ကိုတော့.. ကိုယ့်နိုင်ငံ..ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တာမို့ .. ကွဲပြားခွဲခြားပြောသင့်ေ၇းသင့်တာပေါ့..။
အခုက.. မီဒီယာတွေကိုက… သတိမမူနေကြတော့ကာ… . အဲဒီအသုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့. ဆိုင်ရာတွေရဲ့.. မီဒီယာဝါ..သဘာ ခန့်မှန်းနိုင်လို့ရသွားမယ်ထင်မိတာပါပဲ..။
See American defined for English-language learners »
See American defined for kids »
Examples of AMERICAN
Americans in all 50 states.
The President’s speech began with the words “My fellow Americans…”.
First Known Use of AMERICAN
2. or the Amer·i·cas the lands of the western hemisphere including North, Central, & S. America & the W. Indies
ကန်ဒယ်ဘျာ အမေရိကန် အမေရိကံ အမေရိကမ် ကဲဘာဖြစ်သတုံး….
sponsored scholarship မဟုတ်ခဲ့ရင် နိုမ်ငန်ဒေါ် ကလွှတ်တဲ့ ပညာသင်ဆို နိုမ်ငန်ဒေါ် ဘတ်ဂျက် က ကြခံရ တယ် နိုမ်ငန်ဒေါ် ဘတ်ဂျက် ကပိုက်ဆံတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ငွေကြေးတွေ ဖြစ်ကြောင်း ပိုစ် လေးရေးပါဦးလား ကိုကြောင်ကြီး .
မဟုတ်ရင် နိုမ်ငန်ဒေါ် စေတနာက သိတ်ကြီးနေတယ်ထင်နေကြမယ် ။တယ်
အစိုးရဟူသော ပညတ်မှားကို မသုံးရ။ ပြည့်အစေခံဟူသော ပညတ်မှန်ကိုသာ သုံးစွဲရမည်။
(သခင်ဘသောင်း). ခုလိုညတ်တာကိုပိုသဘောခွေ့ ပါတယ်။ပြည်သူကြားကပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူဖြစ်ရဲ့ သားနဲ့ ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တာ အံ့ပါရဲ့ 
သခင်…..ဘာကြောင့်လဲ အခွန်အခ အကုန်အကျခံထားရတဲ့ အကောင်က သခင် ပိုက်ဆံယူပြီး အမှုထမ်းထဲကောင်က ဘုရင်ခံက ဟိုး ပြာတာအထိ အစေခံ….။ သူတို့အားလုံးအစေခံ …။ဒါကြောင့် သခင်ဘသောင်း……….
(29-5-2011 မြောက်ဥက္ကာလာပ စာပေဟောပြောပွဲ တွင်ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းပြောခဲ့)
မနေ့ကတည်းက မြင်ပီး ဖတ်လို့မရဘူး..နိုမ်ငန်ဒေါ်စိုဗဲ တဲ့…
ဘာများလဲလို့…ထူးဆန်းပါပေ့ ကိုကိုတွတ်ရယ်… ( မှားလို့)
ဒါကလည်း လူတွေပဲဗျာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေချင်တာမို. ပြောင်းကြတာပဲ
သူတို.အလုပ်သွားလုပ်လို. ရတဲ.ပိုက်ဆံနဲ. မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လုပ်ငန်းရှင်းလုပ်ရင် လုပ်ငန်းတွေ တိုးပွားမယ်
အလုပ်အခွင်.လမ်းတွေ တိုးမှာပါပဲ ကိုယ်.နိုင်ငံမှာလုပ်စားလို. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံသားမှ
ခေါင်းစဉ်ပေးတာတော. ပညာသားပါတယ်နော် ကိုကြောင်